15 Makotesheni Paunenge Uri Kunzwa Wakarasika Muhupenyu - Quotes
Wese munhu anonzwa kurasika zvishoma pane imwe nguva mukati mehupenyu hwavo uye iri panguva dzino apo patinotanga kunyatso kuzvibvunza pachedu uye kukosha kwehupenyu. Vazhinji vakaenda pamberi pedu vaifanira kurwisana nemanzwiro akafanana uye, nerombo rakanaka kwatiri, vakapfuudza huchenjeri hwavo.
Kunzwa kurasika chinhu chakasarudzika chinhu chiratidzo chekuti urikusanduka semunhu mumweya nemupfungwa. Kana iwe uri kuenda kuburikidza neakadai nguva muhupenyu hwako izvozvi, aya makotesheni anosungirwa kubatsira.
Kwete kusvikira tarasika ndipo patinotanga kuzvinzwisisa pachedu. - Henry David Thoreau
Ichi ndicho chidzidzo chekutanga uye chakakosha kubva pane zvese zvakatorwa pano. Inosimbisa kuti kana isu tichizonyatsowana isu uye nekunzwisisa nzvimbo yedu mu ichi chose , tinofanira kutanga tazvirasa. Saka usakanda mapfumo pasi kana iwe uchinzwa kunge warasika - zvinoreva kuti iwe unogona ikozvino kutanga kuzviwana wega.
Tinofanira kunge tichida kurega hupenyu hwatakaronga, kuti tive nehupenyu hwakatimirira. - Joseph Campbell
Kazhinji kazhinji, isu tinonzwa takaderera pamusoro pehupenyu hwedu nekuti hazvifananidzi zviroto zvedu nezvishuwo. Muchokwadi, unogona kuronga, kushuvira uye kutarisira zvese zvaunoda, asi hupenyu chete hwaunogona kurarama ndihwo huri pamberi pako. Saka pusha zvaunofungidzira kune rimwe divi uye vhura maziso ako kuhupenyu hwakakumirira.
nzira yekuratidza munhu waunovada
Mweya uyo usina chinangwa chakatemwa muhupenyu unorasika kuve kwese kwese, haufanire kuwana. - Michel de Montaigne
Ichi chirevo chinoburitsa chokwadi chakaomarara nezve hupenyu kuti tirege kunzwa kurasika, tinofanira kuwana kudaidzwa kwedu. Paunogona kuona nekuona chinangwa chako muhupenyu , zvimwe zvese zvinowira munzvimbo.
Iwe unofanirwa kudzika yakawanda yakawanda nzira dzakashata kuti uwane iyo chaiyo. - Bob Parsons
Kutevera pane zvakanaka kubva pane yapfuura quote, pano isu tinoyeuchidzwa kuti kuti tiwane kudana kwedu, isu tinofanirwa kutanga tagadzira izvo zvisiri. Tinofanira kunge takagadzirira kuwana zvinhu zvisirizvo kuitira kuti pakupedzisira tiwane imwe nzira iyo inonzwa kunge yakanaka.
Ukasatevera zvaunoda, hauzombove nazvo. Kana iwe ukasabvunza, mhinduro inogara iri kwete. Ukasapfuurira kumberi, unogara uri panzvimbo imwechete. - Nora Roberts
Kana iwe wakamboda mutengo kuti Push iwe muchiito, ndizvozvo. Meseji iri pachena uye ichokwadi: kusaita basa kunongogara kukuchengeta wakadzika midzi munzvimbo yauri ikozvino. Kuti ufambe kuenda kumberi, unofanirwa kushinga utore nhanho iyoyo.
Ngozi yesarudzo isiriyo inokosheswa nekutyisidzira kwekufunga. - Maimonides
Kana iwe uchinetseka nezve kutora danho risiri iro, saka chirevo ichi chive chidzidzo kwauri. Sezvinotyisa sezvazvinogona kuita sekuita sarudzo isiriyo, zvakatoipa zvakanyanya kusaita sarudzo zvachose.
Makumi maviri emakore kubva ikozvino unenge uchinyadziswa nezvinhu zvausina kuita pane zvawakaita iwe. Saka rasa ndiro. Ngarava ubve pachiteshi chakachengeteka. Tora mhepo dzekutengesa mumaseiri ako. Ongorora. Kurota. Tsvaga. - Hazvizivikanwe
Kuvaka pamusoro pezvidzidzo zviviri zvekupedzisira, chirevo ichi chinotitorera mune ramangwana uye chinotitaurira kuti tingazodemba zvakadii nezvinhu zvatisina kuita. Icho chinokurudzira chakakwana chenguva idzo patinokanganisa parutivi rweyambiro uye kutora njodzi dzipi nedzipi.
Zvinyorwa zvinoenderana (makotesheni anoenderera pazasi):
Kana Iwe Usingazive Zvekuita Nehupenyu Hwako, Verenga Izvi
20 Kusurukirwa Makotesheni Anozokuita Kuti Unzwe Kusakwana Uri wega
Pakauya nguva apo njodzi yekuramba wakasimba mubhudhi yairwadza kupfuura njodzi yayakatora kutumbuka. - Anaïs Nin
Sokunge iwe waida kuwedzera kugutsikana kuti njodzi dzinofanira kutorwa dzimwe nguva, chirevo ichi chinoratidza zvakaomarara kuti kurwisa shanduko yako kunogona kukukonzeresa sei kurwadziwa kukuru pamweya.
Iwe unofanirwa kusiya guta rerunyararo uye uende murenje reyako intuition. Zvamuchaona zvichave zvinonakidza. Izvo iwe zvauchazozviona iwe pachako. - Alan Alda
Paunenge wagadzirira kutora iwo matanho mune isingazivikanwe, rangarira kurega njere dzako kukutungamirira. Iyo inogara iine zvaunofarira pamoyo uye zvinokutungamira iwe kunzvimbo dzaunofanira kuenda.
sei kupa mukomana wako nzvimbo
Ndipo chete patinonyararidza ruzha rwehupenyu hwedu hwezuva nezuva ndipo patinogona kuzopedzisira tava kuzevezera kwechokwadi icho hupenyu hunotizivisa, apo painomira ichigogodza pamikova yemoyo yedu. - K.T. Jong
Usakanganwa kuti kuti unzwe yako intuition uye kuteedzera iko kuda kwehupenyu, iwe unofanirwa kuita runyararo nyika yakakukomberedza. Tiri kurarama munguva yekusimudzira kusingaperi uye inodonhedza manzwi uye meseji dzatinofanira kunyatsoteerera.
Kana iwe usingade chimwe chinhu, chinja icho. Kana iwe usingakwanise kuzvishandura, chinja maitiro ako. - Maya Angelou
Kana paine zvinhu zvehupenyu hwako zvausingade, unofanirwa kunge wakagadzirira kuzvishandura zvachose, kana kushandura nzira yaunozviona nayo kuti udzidze kuzvigamuchira sezvavari.
Vanhu vanofara havana hazvo kuva nezvakanakisa pane zvese asi ivo vanonyanya kushandisa zvese. - Sam Cawthorn
Tisunga mukati zvakanaka neyakareurwa, tinorangarirwa kuti kuti unakidzwe neupenyu, haufanirwe kunge uri mupfumi, mukurumbira, mudiki, kana hutano. Kana iwe ukatsvaga mufaro kubva mune ese mamiriro, iwe unogona kuzadzikiswa uye nekugutsikana kuwanda kune vamwe vanhu vazhinji.
Munhu anenge akapenga-kupenga nekuti arikutsvaga chimwe chinhu chaakatopenga nekuti haazive waari kupenga nekuti anotarisira, anoshuvira uye pakupedzisira, anonzwa kunetseka. Kushungurudzika kunosungirwa kuvapo nekuti haugone uzviwanire nekutsvaga iwe watovepo. Kutsvaga kunofanira kumira, kutsvaga kunodonha. - Osho
Imhaka yekuti chese chinhu chatinomboda chatove mukati medu kuti mararamiro aunotungamira, hupfumi hwauinazvo, uye izvo zvinhu zvaunosangana nazvo hazvitore nzvimbo mukufara kwako iwe. Paunoona izvi, haucharasika.
Kana zvese zvimwe zvarasika, ramangwana rinoramba riripo. - Christian Nestell Bovee
Nguva dzose yeuka kuti chero chii chakauya kumberi uye chero chaunonzwa izvozvi, iro ramangwana rinofanira kunge riripo. Hazvina basa kuti idambudziko ripi rawakatambura kana kurasikirwa kwaunonzwa iwe panguva ino, pane mikana isingaperi mune zvinotevera.
Kurasika ndizvo zviri pamutemo chikamu chemaitiro ako sekuwanikwa. - Alex Ebert
Uye saka tinopedzisa nekutora iyo yakafanana chaizvo neiya yatakatanga, asi chidzidzo chakakosha, chakakosha kudzokorora. Kana iwe uchinzwa kunge wakarasika izvozvi, usakanda mapfumo pasi chikamu chakakosha cheichi chiitiko icho munhu wese wezvemukati anoenda kuburikidza vasati vawana nzvimbo yavo yerunyararo.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuti ungawana sei gwara muhupenyu hwako? Taura nemudzidzisi wehupenyu nhasi anogona kukufamba nenzira iyi. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
maitiro ekuvaka kuvimba muhukama mushure mekunyepa
unoziva sei kuti musikana ari mauri
maitiro ekukunda pamusoro pekusuwa muhukama
unokurumidza sei kudanana
ndinodanana nemumwe munhu mutsva
mukomana wangu ari kufamba zvakanyanya